प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शिक्षा आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति « प्रशासन
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
डिल्लीबजार कन्याबहुमुखी क्याम्पसको ‘३९औँ वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा उनले युग अनुसारको शिक्षाको विकासको लागि राजनीतिक नेतृत्वले विद्धानसँग छलफल गरेर सुधारका कार्य अघि बढाउन सुझाव दिए ।
“विश्वका धेरै मुलुक शिक्षाका कारण विकसित भएका छन्, नेपालको शिक्षालाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ,”उनले भने ।
अहिले शिक्षकले विद्यार्थीलाई रोवर्ट बनाएको छ की मान्छे भनी प्रश्न गर्दै उनले मुलुकको भूगोल र सामाजिक विविधता बुझ्ने शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले मधेश र पहाड मिलाएर गएमात्र मुलुकको विकास हुने बताए । कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका डा. यादवले नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले पैसामा सांसद पद बेच्नु दुर्भाग्य भएको बताए।
प्रदेश नं.३ का प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको स्थिति राम्रो नभएको बताए ।
उहाँले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
प्रदेश नं.३ का अर्का प्रदेशसभा सदस्य गणेश दुलालले नारी शिक्षाको लागि मुलुकले जति पहल गर्नुपर्ने हो त्यो पूर्ण नभएको बताए। “सक्षम जनशक्ति नेपालमा रोक्न नसकेसम्म सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुनसक्दैन,”उनले भने ।
क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने बताए । शिक्षामा नारीको पहुँच बढाउनका लागि वि.सं. २०३७ मा स्थापना भएको क्याम्पसमा हाल स्नातक तहमा मानविकी, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, बिबिएम तथा स्नाकोत्तर तहमा अंग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्र, र व्यवस्थापन तहको पढाइ सञ्चालन गर्दै आएको क्याम्पस प्रमुख अपराजिता अर्यालले जानकारी दिए ।